‘ए मेरो हजुर २’ पछि नयाँ फिल्म खेल्दै सलिनमान « Ramailo छ
‘ए मेरो हजुर २’ पछि नयाँ फिल्म खेल्दै सलिनमान
समय : 6:45 pm
डेव्यु फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ सुपरहिट भएर पनि नायक सलिनमान बनियाँ चुपचाप छन् । तर बिहिबार टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत बाल गायिका जलजला परियारलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्न पुगेका सलिनले नयाँ फिल्म खेल्न लागेको खुलाए । भिडियो हेर्नुस् :
कुन फिल्म गर्दैहुनुहुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सलिनले भने, ‘अहिले केही नभनौं होला । तपाईंहरुले चाँडै थाहा पाउनु हुनेछ । म फिल्म चाहिं गर्दैछु ।’ झरना थापाको नयाँ फिल्म या अन्य ब्यानरका फिल्म भन्ने बारे चाहिं सलिनले गोप्य नै राखे । निर्माता सुनिल कुमार थापाले पनि सलिनलाई लिएर फिल्म निर्माण गर्ने बारे केही बताउन चाहेनन् ।
‘सलिनले कुनै पनि फिल्ममा साइन गर्नु भएको छैन, तर गर्नुहुन्छ भन्ने आश चाहिं छ’, निर्माता थापाले भने । सुनिल थापाको सुहाना इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गर्ने नयाँ फिल्मको नाम ‘भागवत गीता’ या ‘ए मेरो हजुर ३’ हुन सक्छ । राम्रो स्क्रिप्ट भएको खण्डमा थापा क्याम्पमा काम गर्न सकिने सलिनले बताए ।
सलिनले चाहेको स्क्रिप्ट आखिर कस्तो हो त ? ‘रमाईलो होस् । लभ होस् । एक्सन पनि होस् । सबै कुरामा मजा होस् । दर्शकले मन पराउने खालको होस्’, सलिन भन्छन् । सलिनको लागि यस्तो स्क्रिप्ट कसले तयार गर्ला त ?